Qajojiilee Durtii Jijjiiruu
Yoo galmee haaraa Faayilii - Haaraatiin bantu, galmeen duwwaa qajojii LibreOffice irratti hundaa'uudhaan mul'ata. Galmeen inni haaraa akka akkataalee maamilaa ykn qabeentoota biroo ofkeessatti qabatuuf yoo barbaadde, qajojii kana gulaaluu, fooyyessuu ykn bakka buusuu ni dandeessa.
Qajojiilee Durtii Fooyyessuu
Jalqaba, qajojii LibreOffice kan duraan ture baniiti fooyyessi, ykn qajojii barbaadamu uumuuf galmee haaraa baniiti akka barbaachisummaa isaatti gulaali.
Haalta LibreOffice tokkoon tokkoof qajojii galmee qindeessuu ni dandeessa. Kan kanatti aanee jiru galmeewwan barruuf akkamitti akka hojjetamu ibsa.
Qajojiilee Maamiloo Fayyadamuu
Qajojiilee maamiloo kan mataakee fayyadamuun hojiike kan sii salphisan toftaaleen hedduun jiru.
Qajojiilee Ukaankaa Qajojii keessaa
Qajojii Durtii jijjiiruu
Title is: Qajojiilee Durtii Jijjiiruu